Ampidino Wise Folder Hider 4.22.157 ho an'ny Windows
Ampidino Wise Folder Hider
Sehatra: Windows Version: 4.22.157 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (2.10 MB)
Ampidino Wise Folder Hider, Miaraka aminny Wise Folder Hider, azonao atao ny manafina maimaimpoana ny rakitrao sy ny lahatahinao, hisorohana ny hafa tsy hiditra aminny data manokana. Wise Folder Hider dia fitaovana fanafenana rakitra sy fisie maimaimpoana. Ireo mpampiasa dia afaka manafina ny fisie sy ny fisie azy ireo aminny fizarana eo an-toerana na ireo fitaovana azo esorina miaraka aminny fanampianny programa.
Ireo data miafina ireo dia tsy azo idirana mihitsy aminny alàlanny programa hafa na rafi-piasana hafa. Ny fomba tokana hidirana aminireo rakitra sy lahatahiry nafeninao dia ny fidirana aminireo rakitra tadiavinao aminny alàlanny fampidirana ny teny miafina izay napetrakao rehefa nametraka ilay programa ianao. Wise Folder Hider dia natao ho anny fampiasana any an-trano ihany, tsy tokony hamporisika anao izahay hanandrana izany any aminireo andrim-panjakana sy orinasa tsy miankina izay itahirizanao ny angon-drakitra tsiambaratelo sy matotra kokoa.
Wise Folder Hider Specs
Haben'ny rakitra: 2.10 MB